NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်နယူး DPA 2028 ဆိုသံ Mic တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အခင်းအကျင်းကိုပြောင်းလဲရည်ရွယ်
Home » သတင်း » နယူး DPA 2028 ဆိုသံ Mic တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အခင်းအကျင်းကိုပြောင်းလဲရည်ရွယ်
ALLEROD, ဒိန်းမတ်, သြဂုတ် 22, 2019 - DPA မိုက်ကရိုဖုန်း အဆိုပါ၎င်း၏မိုက်ခရိုဖုန်း lineup အသစ်ဖြည့်စွက်တင်ပြ 2028 ဆိုသံမိုက္ကရိုဖုန်း။ အဆိုပါ 2028 အသံအမျိုးအစားအားလုံးကိုထွန်းလင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ DPA ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့သဘာဝကအသံကယ်တင်တတ်၏။ Indie အနုပညာရှင်များထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Tour အဆိုတော်တွေမှလူတိုင်းအတွက်စုံလင်သော, အ 2028 မိုက်ထွက်ရှိသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇာတ်စင်တင်ဆက်မှုများ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူ AV စနစ် application များအတွက်ကိုက်ညီနေသည်။
တိုက်ရိုက်ဇာတ်စင်တွင် 2028 DPA ရဲ့အခြားအကြီးအဖြေရှင်းနည်းများကဲ့သို့တူညီသော Sonic အရည်အသွေးတွေကိုကယ်တင်တတ်၏။ တကယ်တော့ခုနှစ်, 2028 သငျသညျနောကျတ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နားထောင်ပြီးအဆိုတော်ဖို့မတ်တပ်ရပ်နေကြသည်ရုံကဲ့သို့မြည်ရန်မ (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာ) EQ လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကအနုပညာရှင် hone-in ကိုသူတို့ရဲ့အသံအပေါ်စကားသံကိုအပေါ်လျော့နည်း strain ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်မိုက်ခရိုဖုန်း, အသုံးမပြုလျှင်အဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင် 2028 ၏င့်လင်းမြင်သာအင်ဂျင်နီယာများအသံအတွေ့အကြုံကိုထက်အပိုငျးအနေဖြင့်စေသောကိစ္စများအထိဖုံးအုပ်ပုံဖော်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ 2028 စည်းလုံးအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လက်ကိုင်မိုက်ကရိုဖုန်း, အ 4018 VL ကဲ့သို့တူညီသောအံ့သြဖွယ်သောအသံများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇာတ်စင်၏ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများဘို့, 4018 ကဲ့သို့ optimized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဃ၏ Sonic အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံမိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်လိုအပ်မြင်ကြပြီ: စစ်မှန်သော 4018 စီးရီးကားအောက်ပိုင်းစျေးနှုန်း-Point မှာ," Rene Mørch, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ, DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကပြောပါတယ်။ "သာ $ 700 အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာ, ဒီမိုက်ကရိုဖုန်းတစ်ခု overachiever ဖြစ်ပါသည် - က၎င်း၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးထက်ထက်သိသိသာသာပိုကောင်းလုပ်ဆောင်တယ်။ "
အဆိုပါ 2028 တစ်အသစ်စက်စက် fixed-အနေအထားဆေးတောင့်အဖြစ်အထူးဒီဇိုင်းစျေးမှာ-တောင်ပေါ်မှာနဲ့ pop filter ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဒါဟာကျော်ကြား DPA ယူနီဖောင်းချွတ်-ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတစ် supercardioid ဝင်ရိုးစွန်းပုံစံထားပါတယ်။ ဒါဟာမိုက်ခရိုဖုန်းဟာအလွန်မြင့်မားသောအမြတ်-မတိုင်မီ-တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသဘာဝလမ်းအတွက်အသံကတက်ကောက်နေ, နီးကပ်နီးကပ်အခြားတူရိယာကနေသွေးထွက်ကိုင်တွယ်ရန်စေသည်။
"အဆိုတော်တစ်ဦးမိုက်ကရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလိုအသံဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီမိုက်ကရိုဖုန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါတယ်," Mørchကထပ်ပြောသည်။ "သင်မိုက်ခရိုဖုန်း '' စဉ်းစားတွေးခေါ် '' ဘာအနုပညာရှင်ရဲ့အသံကိုအပြည့်အဝ, သဘာဝသံမမြည်ရအနုပညာရှင်များကဲ့သို့အသံ။ ဤသည်အသံဖန်တီးမှုဖြစ်လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီး engineer ပေးသည် - ။ ၎င်းအစားသန့်ရှင်းတဲ့, သဘာဝအသံလမ်းကြောင်းအပေါ် အခြေခံ. စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ထူးခြားသောအသံကသောင်မတင်အပေါ်အလုပ်မလုပ် "
တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုနှင့်အတူကြွလာသောမျှော်လင့်ထား wear-and မျက်ရည်နှင့်တကွ, ပြင်ကင်နှင့် 2028 ၏အတွင်းပိုင်းပေါ့ပ် filter ကိုနှစ်ဦးစလုံး detach လုပ်လိုက်သောနှင့်ဆေးနိုငျသညျ။ အဆိုပါ 2028 သုံးမျိုးကွဲအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, တစ်လက်ကိုင်နှင့်အတူကြိုး XLR နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးအသုံးများကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုကြိုးမဲ့မိုက် configurations ။ ဤသည်နှင့်သဟဇာတ, အ SL1 adapter တို့ပါဝင်သည် Shure, Sony က နှင့် Lectrosonics; Sennheiser နှင့်သဟဇာတနှင့် SE2 adapter ။
တီဗီ IBC 2019 မှာ high-end အီလက်ထရောနစ်အားကစားဂိမ်းစခန်းများနှင့်အတူ၎င်း၏နိမ့်ဆုံး latency ကွန်ယက်တင်ဆက်ပေးတယ်ပေါ်လာ - စက်တင်ဘာလ 10, 2019
KRK စနစ်များနှင့်အတူ OK ကို Go ကိုရဲ့ဒန် Konopka ရဲ့ပေါင်းစု '' SoundBetter '' - စက်တင်ဘာလ 10, 2019
IBC 2019 မှာစက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး andNMOS နည်းပညာသရုပ်ပြများအတွက် TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအိုင်ပီ - စက်တင်ဘာလ 5, 2019
2028 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor + LIVE စွမ်းဆောင်ရည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ် supercardioid ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် အသံမိုက်ကရိုဖုန်း	2019-08-22
ယခင်: alpha မျက်လုံးအသေးစားကင်မရာထဲမှာ optical image ကိုပုံပျက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံဆော့ဖ်ဘောလုံးရွှေအမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်တိုက်ရိုက်လွှ